भक्तपुरमा बाढीको अनौठो ताण्डब ! घर डुबे,खाने गाँससम्म छैन,करोडौंको क्षती - Taja Report
Homeसमाचारभक्तपुरमा बाढीको अनौठो ताण्डब ! घर डुबे,खाने गाँससम्म छैन,करोडौंको क्षती
भक्तपुरमा बाढीको अनौठो ताण्डब ! घर डुबे,खाने गाँससम्म छैन,करोडौंको क्षती
July 12, 2018 समाचार Comments Off on भक्तपुरमा बाढीको अनौठो ताण्डब ! घर डुबे,खाने गाँससम्म छैन,करोडौंको क्षती
काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो बाढी आएको देखिएको थिएन । तराईमा आएको सुनेकाहरुले यसको सास्ती भोगे । प्रत्यक्ष देखें । भक्तपुरमा धेरैको घर डुबानमा छ अहिले । खोला किनारमा बस्नेलाई बढी कष्ट छ । नागरिकको मुखमा हाल्ने गाँस समेत नभएको टिठलाग्दो दृष्य देखियो । नागरिकको बस्ने थातथलो जलमग्न छ । बर्षातमा कहाँ जाने ? के गर्ने चिन्ताको चाङ छ ।
भक्तपुरका कैयौँ बस्ती डुबानमा, ३ को मृत्यु, १५ घर ढले
भक्तपुर, (रासस) । अविरल वर्षाका कारण हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले भक्तपुरको चारैवटा नगरपालिका क्षेत्रमा विनाश निम्त्याएको छ । बाढीले कतिपय बस्ती डुबानमा पारे भने पहिरो र बाढीका कारण मानवीय क्षतिसमेत भए । घर, टहरा, गोठ, पशुपक्षी र चौपाया बगाइएको मात्र हैन हजाराँै बासिन्दा बिचल्लीमा परेका छन् ।
टोलीले चाँगुनारायण नगरपालिकाको कुइँकेल गाउँमा पुगेर मनोहरा नदीले कटान गरी पु¥याएको क्षतिको अनुगमन गर्नुभयो । धार परिवर्तन गरी बस्ती नजिकै आएको मनोहरा नदीको कटानले बस्ती जोखिममा पारेकाले तत्कालै बस्ती सुरक्षित गर्न आवश्यक पहल थाल्न स्थानीयवासीले टोलीसँग माग गरेका छन् ।